Naya Post Nepal | अस्मिताले यति धेरै धो’का खाएकी रहिछन् , पहिलो पटक स’म्झेर रोएपछि…(भिडियो हेर्नुस् )
अस्मिताले यति धेरै धो’का खाएकी रहिछन् , पहिलो पटक स’म्झेर रोएपछि…(भिडियो हेर्नुस् )
नेपाली दोहोरी गीत संगीतका पछिल्लो समयमा सबैको मन मु’टुमा बस्न-सफल गायिका मध्य यी हुन् अस्मिता डल्लाकोटि, अस्मिताको गीत संगीतको यात्रा दोहोरी बाटै सु’रुवात भयपनी उनलाई दोहोरी क्षेत्रको अहिले सम्मकै ठुलो रियालिटी सो दोहोरी च्या’म्पियनबाट अ’झै उनले धेरै दर्शकको माया अनि साथ पाउन स’फल भयाकी थीइन।
उनले दोहोरी च्या’म्पियनमै गायका शब्दले जर्जदेखी आयका अथि ति कलाकारलाई समेत रुहाउन सक्ने-खुबी उनको दोहोरीको शब्द हरुमा देख्न सकिन्छ।
यो संगै उनको गीत संगीतमा च’र्चा-अनि परिचर्चाहरु निकैनै बढेर ग यको तपाइँ हामि समेत देख्न सक्छौं। तेस्तै गरेर अर्का गाएक हुन सु मन परियार खुल’दुली दोहोरी घर को स्टु’डियो मा अस्मिता र सुमन ले दोहोरी गीत गाउदा सबैको आं’खा रसाएको छ्। पुरा भिडियो हे र्नुहोस्
यो पनि ,,काठमाडौं, । सोमबार खुम’लटार निवास बाट सत्ता’रुढ नेकपा माओ’वादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद बाट व्या’ख्यात्मक घो’षणा स’हित पा’रित
भएको अमेरि’की सहायता परियो’जना मिलेनि’यम च्यालेन्ज क र्पाेरे’शन (एमसीसी) सम्झौता बारे पत्रकार लाई झ’ण्डै एक घ’न्टा आफ्नो कु’रा सु’नाए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड’ले सडक आन्दोलन देखि अहिले को यात्रा सम्म आ इ’पुग्न सह’योग गर्ने सबै लाई धन्यवाद दिए । एमसीसी का का र’ण देश दु’र्घटना बाट बचे’को र नेपाली सबै को जि’त भए को पनि उन को भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड ले आफ्ना कुरा राखे पछि पत्रकार ले उन लाई प्रश्न ते र्साए । ‘यहाँ सम्म आइपुग्न लाई प्रहरी र कार्य कता किन भि’डाउनु भयो ?’
प्रचण्ड ले सबै को मेहन’तले व्या’ख्यात्मक घो’षणा सहति एमसी’सी पारित भए को भनाइ राखे । उनले यदि चुप’चाप बसे’को भए यस्तो अवस्था सि’र्जना नहुने पनि ब’ताए ।
‘मैले संस|दीय दलको बैठक’मा राष्ट्र’घात नहोस भनेर खबर’दारी गर्ने लाई धन्यवाद दिए को छु । अस्ति सम्म यथास्थिति मा एस’मी’ सी पा’स हुँदैन भन्ने मै हुँ नि ।
सबै को मेहनत नभए को भए व्या’ख्यात्मक घोषणा’सम्म आउ’ने थिएन । त्यस का’रण यस को सम्बन्ध त्यहाँ छ है । यसो भए पछि अमेरिका ले पनि नयाँ वेय आउट दिन पर्यो नि भन्दै कहीँ न कही नेपाल नराम्रो सँग वि’भाजित हुने
अमेरिका लाई पनि लाग्यो । नेपाली कांग्रेस लाई पनि लाग्यो । हामी त बहस गर्दै थियौँ । त्यस पछि कानू’नी प्रावधान व्या’ख्यात्मक घो’ ष’णा सम्म आइपुग्यौ,’ अध्यक्ष प्रचण्ड’ले
भने, ‘चुप चाप बसे को भए त यो स्थिति हुन्थ्यो त ? यो सबै को प हल कदमी ले समाधान को बिन्दू मा आइ’पुग्न सफल भए का छौँ । त्यस कारण आ’धिबकारीक रुपमा
आन्दोलन’कर्मी सबै लाई धन्यवाद दिए को छु । अब, प्रस्ताव त एउटै बनाइयो नि ! त्यसै ले यो बनाउन म’द्धत गर्ने सबै लाई हृदय देखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’न्युज24नेपाल बाट
२०७८ फाल्गुन १७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 394 Views